ကျွန်တော်၊ဂျူး နှင့် ဒီဇင်ဘာည၊ ပြီးတော့..မေးခွန်းတစ်ခု…….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကျွန်တော်၊ဂျူး နှင့် ဒီဇင်ဘာည၊ ပြီးတော့..မေးခွန်းတစ်ခု……..
ကျွန်တော်၊ဂျူး နှင့် ဒီဇင်ဘာည၊ ပြီးတော့..မေးခွန်းတစ်ခု……..
Posted by alinsett on Jun 19, 2011 in Arts & Humanities, Creative Writing, Critic | 20 comments
ဂျူး ကို လေးစားတဲ့အမှတ်တရပါ။
**2010 ရဲ့ ဒီဇင်ဘာည။ ကျွန်တော် မော်လမြိုင်မြို့ ကိုရောက်တဲ့မနက်မှာပဲ… သတင်းတစ်ခုကြောင့်
စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေခဲ့ တယ်။” ဒီည… စာပေဟောပြောပွဲမှာ ဆရာမဂျူး ပြောမှာ ” ..တဲ့။
ဂျူး..တဲ့ ။ ကျွန်တော် ဒီနာမည်ကို ရင်းနှီးနေခဲ့ တာတော့ကြာပြီ။
စာအုပ်တွေကို ကျိန်စာသင့်သလို ချစ်နေတဲ့ ..၊ စာအုပ်တော…မှာမျောချင်တိုင်းမျောနေတဲ့့ကျွန်တော်။ ဂျူးရေး တဲ့တိမ်နဲ့ ချည်တဲ့ ကြိုး ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်မိချိန်ကစ ပြီး… ဂျူးရဲ့စာတွေ မှန်သမျှကို စိတ်ဝင်တစား ထပ်..ရှာ ဖတ်…ခဲ့ ။
ဂျူးရဲ့ စာတွေကို တရင်းတနှီး ရှိပြီးနောက်မှာ ဂျူးရဲ့ အသံကို ကြားချင်ခဲ့ ပြီ။ ဟော…
အခုတော့ တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့် ဂျူးစကားပြောတာကို တွေ့ ရ …ကြားရတော့မယ်။
ဒါပေမယ့်ဟောပြောပွဲ ကို ကျွန်တော်ရောက်တော့ ဂျုးက စကားတွေ ပြောနေပြီ။
” ဒီလို စကားပြောစင်လေးနဲ့ ပြောရတာကို ကျွန်မ ကျေနပ်ပါတယ်။ နားထောင်တဲ့ သူတွေ က
အရမ်းများနေလို့ ကျွန်မ ကြောက်ဒူး တုန်နေခဲ့ ရင်… ကျွန်မ ဒူး တုန်နေတာကို မမြင်အောင်
ဒီစင် က ကွယ်ထားပေးလို့ပါ။ ပြီးတော့…စင်ရဲ့ ဘေး တစ်ဖက်စီမှာ..ပန်းကလေးတွေ ကို
စီစဉ်ပေးထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပန်းကလေးတွေ ကို ဘေးမှာထားပြီး…ကျွန်မ ဘယ်
မှာမှ စကားမပြောဖူးပါဘူး။ဒီလို ပန်းကလေးတွေကို မြင်လိုက်ရတဲ့ အခါ မိန်းမပီပီ…..
ဒီထက် တစ်ဆင့်တက်ပြီး ပြောရရင်..အပျိုကြီးပီပီ ……..”
ဂျူးရဲ့ စကားက မဆုံးလိုက်ပါဘူး။ လူတွေအားလုံး သဘောကျပြီး
ဟေးးးးး ခနဲ အော်လိုက် ကြတယ်လေ။
“အဲဒီလိုပဲ……ကျွန်မ ကြော်ငြာ ၀င်ရပါတယ်”
အဲဒီက စ လို့ဂျူးရဲ့ စကားသံတွေက ကျွန်တော့် အာရုံ ကို ဆွဲယူ သွားပါတယ်။ ဂျူးဟာ သူ့ 
စကားတွေကို သူ့အမူအယာ နဲ့ဖြည့်စွက်ပြီး အားလုံးကို ဆွဲဆောင်ထားတာလေ…။
သူ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ အကြောင်း..၊ သူကြိုက်တဲ့ ကဗျာတွေ …အကြောင်း၊ သူ အပျိုကြီး ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း….၊ သူ ရေး ခဲ့ တဲ့ စာတွေ ……..။
ကျွန်တော် မော်လမြိုင်ကို ရောက်ရှိခဲ့ တာ တန် သွားစေတဲ့ ၊ ကျွန်တော် ဂျူး
ရဲ့ စကားတွေ ကို လာနားထောင်ရတာကို တန် သွားစေတဲ့ စကား တစ်ခု ကို တော့
ဂျူးက သူ့ ဟောပြောမှု အဆုံး သတ်ကာနီး မှာ…ပြောလိုက်ပါတယ်။
” ဂျူး…..လူုငယ်တွေကို ဘာပြောချင်လဲ…… လို့ မေးလာခဲ့ ရင်…….ကျွန်မ ပြောဖြစ်
တဲ့စကားက ……
မျိုးဆက်တိုင်းဟာ….ပစ္စုပန်ထက် ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေးဖို့ 
လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးသံများ…………….၊ ဟေးးးးးး ခနဲ အော်ဟစ်လိုက်သံများ……..
ကွင်းပြင်ကြီး အနှံ့ကျယ်လောင်စွာ………။
အားလုံး လှုပ်ရှား ဆူညံ သွားကြပြီ။ အဲဒီ လှုပ်ရှား မှု ကြီး ကြားမှာ………. ကျွန်တော်ကတော့……… ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်နေမိတယ်။
ကျွန်တော်ကို ကျွန်တော် ပြန်မေးနေတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကြောင့်ပေါ့။
ကိုယ့်ဘာသာ မေးရင်း ဖြေရင်း…….၊ ထပ်မေးရင်း… ထပ်ဖြေရင်း နဲ့ …………………
” ငါ……. …တာဝန် ကျေပြီလား……? “
30.12.2010 မော်လမြိုင်မြို့စာပေဟောပြောပွဲံ ရောက်
ကျွန်တော့် သား သမီး တွေကို စာဖတ်တတ်တဲ့ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ သူလေးတွေ ဖြစ်ဘို့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခု ဖန်တီးပေးမယ်
ဒါပေမဲ့ စာအုပ်အားလုံး ကိုတော့ ဖတ်ခိုင်းလို့မရသေးဘူး ငယ်ရွယ်စဉ် အမှားအမှန်ကိုမခွဲခြားတတ်စဉ်မှာ တချို့ စာအုပ်တွေ မဖတ်ဘို့တားရဦးမယ်
ဂျူး ရဲ့ စာအုပ်အားလုံးကတော့ ကြိုက်တဲ့ အချိန်ဖတ်ပါလို့ ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေပဲ
”အမှတ်တရ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကောပေးဖတ်မှာလား။ ကျွန်တော်လည်း ဂျူး ရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်ပါ။
အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ living together ကို ထမင်းစားရေသောက်လိုရေးထားတယ်လေ။ စာပေအားပေးတာ ကောင်းပေမယ့် စိတ်ပူတတ်တဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်အတွက် ဂျူး ရဲ့ စာအုပ်အားလုံးကတော့ ကြိုက်တဲ့ အချိန်ဖတ်ပါလို့ ခွင့်ပြုနိုင်တာ နည်းနည်းလွဲနေသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်အထင်ပါ။ ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။
အမှတ်တရ စာအုပ်ကို သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျ…
အတူတူနေတယ်ဆိုတာလောက်ပဲ ပါပြီး… လင်မယားလိုနေတာမှမဟုတ်တာ…ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခု…စကားပြောခန်းမှာ ထည့်ထားပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေက ပြောကြတယ်… ဂျူးစာအုပ်ဖတ်ပြီး အပျိုကြီး ဖြစ်မယ့်သူတဲ့… ပြောချင်ပြောပါစေ… ဂျူးရဲ့ အယူအဆကိုကြိုက်တယ်… သူ့စာအုပ်တွေထဲမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္တမာနတွေအကြောင်း၊ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်တတ်ပုံအကြောင်းတွေပြောထားပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီမိန်းမက သူ့မာနကို လုံးဝအောက်မချခဲ့ဘူး.. ဘုရင်မဖြစ်နေတဲ့သူက မိဖုရားမလုပ်နိုင်ဘူးလေ…
ဂျူးစာအုပ်အားလုံးကို ဖတ်ကြည့်ရင် ယောင်္ကျားတွေရဲ့ အတ္တမာနတွေအကြောင်းကြည့်ပဲရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမတွေရဲ့ ချစ်တတ်ပုံအကြောင်းတွေပဲ ချပြထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့လောက ကြီးက ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ မတူညီတဲ့ တွေးခေါ်ပုံတွေကို ညင်ညင်သာသာ လက်ခံနိုင်အောင်ပြထားတာများပါတယ်။ မိန်းမတွေဘက်က နစ်နာတယ်ထင်ရင်လည်း သဘာဝရဲ့လက်ဆောင်ပဲမို့ သဘောတူ လက်ခံနိုင်လာရင် အပျိုကြီးဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။
ဂျူးကိုယ်တိုင် အပျိုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့သာ အပျိုကြီးဖြစ်ရတာဖြစ်ပြီး ယောင်္ကျားတွေကိုမုန်းလို့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။
သူ့စာအုပ်တွေက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘ၀ကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ သဘောကိုတော့ ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျပါတယ်။
ကျွန်တော်ဆို ဂျူးစာအုပ် ဖတ်ပြီးမှာ ဂျီမေးလ်စသုံးတာပါ။
တာဝန်သိတဲ့သူမှပဲ တာဝန်ရှိတာပါ။ နေရာတိုင်းမှာ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မိဘ ကိုယ့်မိသားစုကို သမ္မာအာဇီဝ လုပ်ကိုင်ကြွေးနေတဲ့သူကို တာဝန်ကျေသူလို့ဆိုချင်ပါတယ်။
ဂျူးစာအုပ်ထဲမှာ လရဲ့အောက်ဖက်မိုင်အဝေးမှာကို အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ။
တစ်ချို့စာအုပ်တွေမှာ မြန်မာမိန်းကလေးစရိုက်နဲ့ သိပ်မဆီလျော်တာတွေပါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းနဲ့ ရေးဟန်တွေက အမြဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။လရဲ့အောက်ဖက်ကတော့ လူငယ်တွေအတွက် မသိမသာလေးနဲ့ ပညာပေးထားတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
သူ့ရဲ့ မျိုးဆက်တိုင်းဟာ….ပစ္စုပန်ထက် ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေးဖို့ 
တာဝန်ရှိတယ်….။ ” စကားလေးလည်း သဘောကျပါတယ်။
ဂျူးထွက်သမျှ စာအုပ်အားလုံးဖတ်ဖူးတယ် … ၁၀ တန်းတုန်းက ပထမဆုံးဖတ်ရတဲ့ အမှတ်တရကိုတော့ အမှတ်တရဖြစ်နေအောင် အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ခဏခဏ ပြန်ဖတ်တိုင်းလဲ ကြိုက်ပါတယ် ..
အဲဒီနိုင်ငံဂျားသားရေးတဲ့ စာအုပ်ကို မြန်မာပြည်မှာ တော်တော်ဖတ်ကြတယ်နော်။ စစ်တပ်က နိုင်ငံဂျားမုန်းတီးရေးပြောပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံကို မျက်နှာလုပ်ချင်တော့… :mad:
ခင်ဗျားပြောတာကို ကျွန်တော်လုံးဝမရှင်းပါ။ ဂျူး ကသူ့ကိုယ်သူ အဲဒီနာမည်ပေးတာ နိမ့်ကျနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ ဘဝကို ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပေးခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ နောက်ပြီး ဂျူးက ပေါ်လစီမရေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကို မျက်စေ့ဖွင့်တဲ့စာ ပညာပေးတဲ့စာပဲရေးတာပါ။
ဂျူးရဲ့ စာအုပ်အားလုံး ကို ကြိုက်သည်။
နွယ်ပင်လဲ ဆရာမဂျူးရဲ့ ပရိသတ်ပါ ဆရာမရဲ့ ထွက်တဲ့စာအုပ်တိုင်းကို မလွတ်တန်းကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်
ခဏခဏဖတ်ပြန်ဖတ်ဖြစ်တာကတော့ တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုးနဲ့ စောင့်နေမယ်လို့မပြောလိုက်ဘူး စာအုပ်ပါ
ပထမဦးဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရဆို ဖတ်ချင်လွန်းလို့ မိတ္တူဆိုင်ကတောင် ဝယ်ဖတ်ရဲ့အထိပဲ ………..
ကျွန်တော် လဲ ဖတ်မယ် ဗျာ
ကိုယ့်​မျိုးဆက်​မရှိလဲ ကိုယ်​​အောက်​ငယ်​သူ​တေ်ွအ​ပေါ်မှာ ​စေတနာအပြည့်​ထားပြီး အကူအညီ​ပေးရင်​ တာဝန်​​ကျေပါတယ်​ အလက်​ဆင်းဒါးရယ်​ ။ အဲ့ဒါကမှ ဘာသံ​ယောဇဉ်​အ​နှောင်​အဖွဲ့မှ မပါတဲ့ တစ်​ကယ့်​ ကုသိုလ်​စစ်​ ။ အဲ့လို ​စေတနာထားနိုင်​တဲ့သူလည်း ရှားပါလိမ့်​မယ်​ ။ ဆရာမလည်း အဲ့လို သ​ဘောထားရှိ​နေလိမ့်​မယ်​ ထင်​ပါတယ်​ ။
အဲ…. ကျနော့်ပိုစ့်အဟောင်းလေး…ဦးနီ ပြန်ဖော်လို့ ပေါ်လာပါပကော….
ကိုယ့်ထက် တစ်ခုခု နိမ့်ပါးနေတဲ့သူက…လိုအပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုကို ကူညီလိုက်နိုင်တာဟာလည်း…
.လောလောဆယ်တော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က အကူအညီတွေ လိုနေချိန်…
ကိုယ့် ကိုယ်​​တွေ့ အ​တွေ့ အကြုံမှာ​တော့ သူတစ်​ပါးကို ကူညီဖို့အားထုတ်​လိုက်​ချိန်​မှာ ကိုယ့်​မှာ အခက်​အခဲ တစ်​ခုခု ကြုံ​နေရတဲ့ အချိန်​နဲ့ သွားသွားတိုက်​ဆိုင်​​နေတတ်​တယ်​ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ကူညီဖို့ ​စေတနာမပျက်​ပဲနဲ့ အခက်​အခဲကို ​ကျော်​လွှားခဲ့ဖူးတာချည့်​ပဲ ။ စတိမပျက်​ပါနဲ့ ကိုယ်​ကသာ ​စေတနာမှန်​ရင်​ တစ်​ခုခုနဲ့ ကိုယ်​အဆင်​​ပြေသွားတတ်​ပါတယ်​ ။ ( သကြား​မျှော်​ ဝါဒ ​တော့မဟုတ်​ )
တချို့စာအုပ်တွေဆို လူငယ်တွေအတွက် အဆိပ်ဖြေဆေးပါ ထည့်ပေးနေသေး
ဥပမာ စောင့်နေမယ်လို့ မပြောလိုက်ဘူး ဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေ